Ugaadhsiga Xaqul-qalinka ee xubnaha yar ku kooban iyo Khataraha Dahsoon ee Saldhiga Ciidamada ee Berberi Xanbaarsan Yahay | Cabays.com
Ugaadhsiga Xaqul-qalinka ee xubnaha yar ku kooban iyo Khataraha Dahsoon ee Saldhiga Ciidamada ee Berberi Xanbaarsan Yahay
January 13, 2017 - Written by Cabays
Cabays Media:- Rayi/Aragti:
Somaliland waxay dhacdaa bogcad aad uqaali ah oo ah marin biyoodka muhiimka ah ee loo yaqaan Baab Al Mandab ( Iridii Ilmada) marinkaas oo sida Suez-ka oo kale isku xidha Badda cad, Bada cas iyo Badweynta Hindiya. Marinkan muhiimka ah oo uu hada ka socdo loolanka gacanka cadmeed, ayaa waxaa dhawaan Isbahaysiga Carbeed JSL ka soo codsadeen in ay Saldhig Ciidan ( Xoro Ciidan) ka sameystaan Gegida Dayaaradaha ee Magaalada Berbera oo hore u ahaan jiray Garoonka Ciidamada ee Africa ugu dheer. Waxaa kale oo ilo wadareedyo udhuun daloola heshiiskani ka dhawaajiyeen in ay isbahaysigaa carbeed ay doonayaa iyana Saldhig kale oo badeed in ay ka yagleeshaan Xeebta Awliyo koonbo oo 15 km xaga Waqooyi Koonfureed ka xigta Magaalada Berbera .
Saldhigan balaadhan ayaa isbahaysiga Carbeed u ah mid goob muhiim u ah oo dano gaar ah u leh, Waxaana uu ku fadhiisan doona dhul baaxadiisu tahay 40 isku wareeg ah oo Saldhig ciidanka Cirka ah ”. Saldhigaas oo Dayaaradaha dagaalka iyo hubkoodu hogan doonaan kana dagaal geli karaan markii loo baahdo..Waxaa kale oo Saldhigan lagu kaydin doonaa hubka Ciidamada kala duwan iyo saanada dagaalka. Waxaa kale Saldhigu yeelanayaa qayb badda ah oo aan aad uga fogeyn Saldhiga Ciidanka Cirka hadii lagu heshiiyo. Saldhigaa labaad oo noqon doona Saldhiga Ciidanka Badda, ayaa isna ku fadhiisan doonta dhul baaxadiisu tahay ugu yaraan ilaa iyo 20 Miles square kaas oo Maraakiibta Dagaalku ay ku soo xidhan doonaan, hogan doonaan oo shidaalka ka qaadan karaan, kana shiraacan doonaan oo ka dagaal geli karaan.
3- Sidee Dawlad aan la ictiraafin heshiis baaxadaas leh ula geli kartaa Dawlado baaxad leh oo aan ictiraafsaneyn oo ujeedooyinkoodu ku kooban yihiin dano dhanka amaanka ah?
6- Ma laga yaabaa in uu Saldhigan iyo Ciidamadiisu ay inagu soo celiyaan khal-khal amni, iska hor-imaad Ciidan iyo u fikir qaabkii wax-adoonsadaha.
A) Saldhigani Wuxuu shacabka Somaliland ee gaadhaaya 3.5 Million-ka uu badhtanka u dhigi doonaa khatarta dagaal caalami ah.
E) Waxaa Saldhigu wax-yeelaynayaa Bay’ada Gobolka ‘Deegaan ahaan’ maadaama ay soo kordhinayaa qiiq badan, guux iyo sanqadh badan,xashiish, fadare iyo bulaacado.
qalinkii : C/raxmaan Fidhinle
Afeef: Qoraal kasto ku soo baxa Cabays Media waxa uu ka turjumayaa aragtida qorihiis, mana aha macnaheedu mid matalaya Cabays Media. Wixii qoraalo ah ku soo hagaaji editor@cabays.com